Paoly 2 Taratasy ho An'ny Tesalonianina – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Paoly 2 Taratasy ho An'ny Tesalonianina
1:1 Paoly sy Sylvanus sy Timoty, ny fiangonan'ny Tesaloniana,, ao amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
1:2 Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anareo, avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
1:3 Tokony misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, rahalahy, amin'ny fomba mety tsara, satria ny finoana mitombo fatratra, ary noho ny fitiavana ny tsirairay avy aminareo ny hafa no be,
1:4 loatra ka tenanay na dia voninahitra ao anareo any amin'ny fiangonan'Andriamanitra, noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra ny sy fahoriana izay miaritra,
1:5 izay famantarana ny fitsarana marina 'Andriamanitra, mba hatao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay koa mijaly.
1:6 Fa tokoa, izany fotsiny ho an'Andriamanitra mba hamaly fahoriana ho an 'ireo izay mampahory anareo,
1:7 ary hamaly anao, izay ho raiki-tahotra, amin'ny fialan-tsasatra miaraka aminay, rehefa ny Tompo Jesosy dia aseho avy any an-danitra mbamin'ny anjelin'ny ny hatsaran-toetra,
1:8 fanomezana fanamarinana, noho ny lelafo, tezitra amin'ny mpanao tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy mankatò ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompontsika.
1:9 Ireo dia homena ny sazy mandrakizay vokatry ny fandringanana, afa-tsy ny tavan'ny Tompo, ary afa-tsy ny voninahitry ny hatsaran-toetra,
1:10 rehefa tonga mba hankalazaina eo amin'ny olony masina, ary ho lasa zava-mahagaga rehetra ireo izay efa mino, amin'izany andro izany, satria ny fijoroana ho vavolombelona efa nino ianareo.
1:11 Noho io, koa, no angatahinay mandrakariva ny aminareo, ka dia ny Andriamanitra mba hahatonga anareo ho mendrika ny fiantsoana sy ny mety hamita izay asa ny hatsaram-pony, ary koa ny asan'ny finoana hatsaran-toetra,
1:12 mba fa ny anaran'i Jesosy Tompontsika, mba hankalazaina ao aminareo, ary ianareo ao aminy, araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo.
2:1 Fa mangataka aminareo izahay, rahalahy, momba ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fanangonana azy,
2:2 fa tsy ho sahiran-tsaina, na raiki-tahotra avy hatrany ao an-tsainareo, misy fanahy, na teny, na taratasy, lazaina fa iraka avy aminay, milaza fa ny andron'ny Tompo dia akaiky ny.
2:3 Aoka tsy hisy hamitaka anareo na amin'inona na amin'inona. Noho izany tsy afaka ny ho, raha tsy ny fivadiham-pinoana, dia efa tonga aloha, ary ny olona ny ota dia efa nambara, ilay zanaky ny fahaverezana,
2:4 iza no manana ady ho, ary izay hiavonavonan'ny, izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, loatra ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, manolotra ny tenany miova tsy toy ny Andriamanitra.
2:5 Sa tsy mahatsiaro izany, fony aho mbola teo aminareo, Efa nolazaiko anareo izany zavatra izany?
2:6 Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra izany no mihazona azy niverina, ka dia mba haseho tao an-potoana.
2:7 Fa ny zava-miafina ny helony dia efa any am-piasana. Ary iray ihany no mihazona izao indray, ary mbola misalasala, ambara-pahatonga azy nalaina tao aminay.
2:8 Ary avy eo dia iray iniquitous haseho, ny olona izay tian'i Jehovah Jesosy, dia handringana ny fofonain'ny vavany, ary hofoanany Ary teo amin'ny famirapiratana ny niverenany:
2:9 azy izay fiavian'ny dia miaraka amin'ny asan'ny Satana, amin'ny isan-karazany ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga,
2:10 ary ny famitahana rehetra ny heloka, amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana, mba ho voavonjy. Izany no antony, Andriamanitra dia haniraka azy asan'ny famitahana, mba mino ny lainga,
2:11 mba fa ireo izay rehetra tsy nino ny marina, fa izay nanaiky ratsy, mba hotsaraina.
2:12 Kanefa tsy maintsy foana misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo, rahalahy, malalan'Andriamanitra sady, satria Andriamanitra efa nifidy anareo ho voaloham-bokatra ho amin'ny famonjena, amin'ny fanamasinan'ny Fanahy sy noho ny finoana ny fahamarinana.
2:13 Efa niantso anareo koa ny fahamarinana amin'ny alalan'ny Filazantsara, amin 'ny fahazoana ny voninahitr'i Jesosy Kristy Tompontsika.
2:14 Ary noho izany, rahalahy, mafy orina, ka hazòny ny fampianarana natolotra izay ho nianaranao, na tamin'ny teninay, na tamin'ny epistilinay.
2:15 Koa enga anie i Jesosy Kristy Tompontsika mihitsy, sy Andriamanitra Raintsika, Izay efa tia antsika sy nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana,
2:16 mananatra ny fonareo sy hampiorina anareo amin'ny tsara rehetra teny sy ny atao.
3:1 Ny amin'ny zavatra hafa, rahalahy, mivavaha ho anay, ka ny Tenin'Andriamanitra mba handroso ka hankalazaina, araka ny aminareo,
3:2 ary toy izany koa mba ho afaka amin'ny pertinacious sy ny ratsy fanahy. Fa tsy ny rehetra no mahatoky.
3:3 Nefa mahatoky Andriamanitra. Izy no hampahery anao, dia hiaro anao amin'ny ratsy.
3:4 Fa izahay matoky momba anao ao amin'ny Tompo, fa ianao no manao, ary hanohy hanao, Tahaka ny nampianatra.
3:5 Ary ny Tompo anie hanitsy lalana ny fonareo, ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny faharetan'i Kristy.
3:6 Mampitandrina mafy anefa izahay anao, rahalahy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba hitaona anareo hiala amin'ny rahalahy rehetra izay mandeha amin'ny fikorontanana, fa tsy araka ny fampianarana satria nandray avy taminay.
3:7 Satria ianareo mahalala ny fomba izay tokony hanahaka antsika. Fa izahay dia tsy nitoetra tsara teo aminareo.
3:8 Ary tsy nihinan-kanina izahay avy amin'ny olona maimaim-poana, fa aleo, izahay, niasa andro aman'alina, amin'ny zava-tsarotra sy ny reraka, mba tsy ho enta-mavesatra ho anao.
3:9 Tsy toy ny raha tsy nanana fahefana, fa izany mba hahafahantsika manolotra ny tenantsika ho ohatra ho anao, mba hanahaka antsika.
3:10 Avy eo, koa, raha mbola teo aminareo izahay,, dia nanaiky izany ho anao: fa raha misy olona tsy vonona ny hiasa, aoka tsy hihinana izy.
3:11 Fa efa renay fa misy ny sasany eo aminareo izay manao disruptively, tsy miasa mihitsy, fa amim-paharisihana misafoaka.
3:12 Ankehitriny dia nandidy ireo izay manao toy izany, ary mangataka azy ireo ao amin'ny Tompo Jesoa Kristy, fa miasa amin'ny fahanginana sy hihinana izay azy ihany.
3:13 Ary ianao, rahalahy, Tsy mitombo malemy amin'ny fanaovan-tsoa.
3:14 Fa raha misy tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity, mamantatra azy ary aza mikambana aminy, ka dia mba hahamenatra.
3:15 Fa aza vonona ny mihevitra azy ho fahavalo; fa tsy, nanitsy azy toy ny rahalahy.
3:16 Ary enga anie ny Tompon'ny fiadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakizay, eo amin'ny fitoerana rehetra. Enga anie ny Tompo anie homba anareo rehetra.
3:17 Ny fiarahabana an'i Paoly tanako, dia ny tombo-kase eo amin'ny epistily rehetra. Toy izany no manoratra.
3:18 Enga anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika Ho aminareo rehetra. Amen.